Milatariga Mareykanka oo iibsadeen xogta goobta barnaamijyada caanka ah ee Muslimiinta: Warbixin | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Milatariga Mareykanka oo iibsadeen xogta goobta barnaamijyada caanka ah ee Muslimiinta: Warbixin
Milatariga Mareykanka oo iibsadeen xogta goobta barnaamijyada caanka ah ee Muslimiinta: Warbixin
Baadhitaan ay samaysay majaladda internetka ee ‘Motherboard’ ayaa lagu ogaaday in Taliska Hawlgallada Gaarka ah ee Maraykanku uu ka soo iibsanayo xogta goobta adduunka shirkado dhawr ah.
Mid ka mid ah shirkadaha ku lugta leh iibinta xogta goobta ayaa sheegaysa inay la socoto 25 milyan oo qalab gudaha Mareykanka bil kasta iyo 40 milyan oo meelo kale ah
Milatariga Mareykanka ayaa iibsanaya macluumaad gaar ah oo laga soo uruuriyay barnaamijyada adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan dhowr ay adeegsadeen Muslimiinta oo laga soo dejiyey ku dhowaad 100 bilyan oo jeer, warbixin ayaa leh.
Baaritaan ay sameysay majaladda internetka ee ‘Motherboard’ oo la daabacay Isniintii ayaa lagu ogaaday in Taliska Howlgallada Gaarka ah ee Mareykanka uu ka soo iibsanayo xogta shirkado dhowr ah goobta ay ku sugan yihiin.
Helitaanka Gudaha: Ka walaac awooda Twitter si loo ilaaliyo xogta isticmaalaha
Shiinaha wuxuu isku dayayaa inuu hoggaanka u qabto amniga xogta adduunka: Warbixin
Si loola dagaallamo xogta gumeystaha, waxaan u baahanahay Dhaqdhaqaaq Farsamo oo aan isbahaysi lahayn
Transparency riix: 34 shirkado waaweyn ayaa ogolaaday inay soo bandhigaan xogta kala duwanaanta
Barnaamijkii ugu caansanaa ee dadka la bartilmaameedsaday wuxuu ahaa salaad Muslimiin ah iyo barnaamij Quraan ah oo in ka badan 98 milyan laga soo dejinayo adduunka oo dhan. Kuwa kale waxaa ka mid ahaa barnaamij shukaansi Muslim ah.
Iyada oo ku saleysan diiwaanka dadweynaha, wareysiyada lala yeelanayo horumariyeyaasha, iyo falanqaynta farsamada, baaritaanka Motherboard-ka waxaa lagu xusay in shirkadaha qaar ay helaan xogta goobta barnaamijka markii xayeysiiyayaashu ay bixinayaan lacag si ay u geliyaan xayeysiiskooda daalacashada dadka.
‘Macaamiisha militariga Mareykanka’
Mid ka mid ah shirkadaha ku lugta leh iibinta xogta goobta, X-Mode, ayaa sheegtay inay la socoto 25 milyan oo qalab gudaha Mareykanka bil kasta iyo 40 milyan oo meelo kale ah – oo ay ku jiraan Midowga Yurub, Latin Amerika, iyo gobolka Aasiya iyo Baasifigga.
Motherboard-ka wuxuu ku rakibay barnaamijka shukaansiga muslimiinta mingle taleefanka Android-ka wuxuuna daawaday iyadoo ay si isdaba joog ah ugu dirtay iskuduwaha saxda ah ee juqraafiga oo ay weheliso magaca shabakadda WiFi ee loo yaqaan ‘X-Mode’.
Baadhitaanku wuxuu helay barnaamijyo kale oo gudbinaya xogta goobta oo ay ka mid yihiin barnaamij talaabo-celin la yiraahdo Accupedo, barnaamijka cimilada ee Global Storms, iyo CPlus oo loogu talagalay Craigslist.
Senator-ka Mareykanka Ron Wyden ayaa u sheegay Motherboard-ka in X-Mode sidoo kale uu qirtay iibinta xogta ay ururiyeen “macaamiisha militariga Mareykanka” ee kale.
Shirkadda ayaa difaacday dhaqankaas.
“X-Mode waxay ruqsad siineysaa gudiga xogteeda tiro yar oo ka mid ah shirkadaha teknolojiyadda ee laga yaabo inay la shaqeeyaan adeegyada milatariga ee dowladda, laakiin shaqada aan la leenahay qandaraasleyda noocan oo kale ah waa mid caalami ah waxaana ugu horreyn diiradda saareynaa seddex kiis oo adeegsi ah: la dagaallanka argagixisada, amniga internetka iyo saadaalinta mustaqbalka COVID -19 kulkulul, “X-Mode ayaa u sheegay majaladda internetka.
Previous articleSaraakiil Sar sare oo Alshabaab ah oo Nolosha lagu qabtay
Next articleQarax goor dhawayd ka dhacay maqaaxi ku taalla dugsiga tababarka ciidamada Janaraal Kaahiye..
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho ayaa si kulul u weeraray siyaasiyiinta iyo musharaxiinta shirku uga socday Muqdisho ee maanta soo soo saaray...